Nagarik News - मिट–मसला र नुन–खुर्सानीको खिर
श्रम–दिवसको दिन जन्मिएकीले मैले नातिनीको नाम श्रमिका राखिदिएको थिएँ। वास्तवमै उनी श्रमिक भएर निस्किसकेकी छन्। टेलिभिजन उनैले खोल्नुपर्ने, टेलिफुन उनैले उठाउनुपर्ने, कुचो उनैले लाउनुपर्ने। हाम्रो कपालसमेत बाटिदिन भ्याउँछिन्। एउटा कचौरो पखाल्नलाई एक करुवा पानी खत्याउँछिन्, भाँडा माझ्न उनै अगि सर्छिन्। कोठामा कम्युटर चलाउने उनै, बारीमा फर्सी फलाउने उनै। उनले नजानेको काम केही छैन तर अङ्ग विकसित भइनसकेको भएर होला राम्रो गर्ने ढङ्ग छैन। सुझाव स्वीकार गर्ने साहस छैन। उनी सर्वज्ञ हुन्। एक दिन त हपाँ आमासँग गएर गाईको गोबरसमेत सोरिछन्।
गत शनिवार बालदिवस रहेछ! यस उपलक्ष्यमा मेरी नातिनीले विशेष खानेकुरा बनाउनुपर्ने हठ व्यक्त गरिन्—“बालदिवसमा विशेष परिकार बनाएर खानुपर्छ अरे! माला गुरुमाले भन्नुभएको!” बालमस्तिष्कमा पीडा नपरोस् भनेर मैले नातिनीको होमा हो मिसाइदिने गरेको थिएँ। बालदिवसका दिन त झन् के भन्नु र! उनकै रोजाइको परिकार बनाउनुपर्ने अरे!
चार वर्षकी बहिनी र छ वर्षको दाइ भएर परिकारको कल्पना गरे। दाजु चाहिँले हतपताउँदै भने—“मलाई एउटा जुक्ती फुर्यो्! जे पकाए पनि मिट मसला हाल्नुपर्छ! स्वादिलो मिट मसला!” उनले मासु–मसलालाई 'मिट मसला' भनेका रहेछन्। नातिले एउटा शब्द भने पनि अङ्ग्रेजी जानेकोमा मैले मनमनै गौरव पनि गरेँ। पालो आयो, बहिनीको। उनलाई असाध्यै मन पर्ने वस्तु भनेकै खिर हो। “मिटमसला हालेर खिर बनाउने!” दाजुले आफ्नो प्रस्ताव पनि पारित भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै थपे—“अलिकति खुर्सानी र नुन पनि मिसाउनुपर्छ है नानी! नत्र मिठो हुँदैन।” बाल–सम्मति त भयो तर अनर्थै हुने भयो। मिट–मसला र नुन–खुर्सानी हालेर पकाएको खिर कस्तो होला? परिवारका वयस्क, प्रौढ र वृद्ध– सदस्यको सर्व–विमति भयो। हामीले नपकाइदिने भएपछि उनीहरू आफैँ तम्सिए।
म चाहिँ नेपाली टेलिभिजनका उद्घोषक र समाचार–वाचकहरूबाट नेपाली भाषा सिक्दै थिएँ। ऐन(अइन्)–कानुन 'एनकानुन' भइसकेछ। विद्यार्थी(विद्द्यार्थी) विध्ध्यार्थी भएको भयै छ। चाहिँदोभन्दा बढी प्रयोग गरेर स्थिति बुझाउने 'अवस्था' शब्दलाई थेगो बनाउने प्रतिस्पर्द्धा गरिँदै छ। “आज पानी परेको अवस्था छ। बटुवाहरूले छाता ओढेको अवस्था हो। जताततै पहिरो गएको अवस्था थियो। स्वयं–सेवकहरू सक्रिय भएको अवस्था छ।”
कसै–कसैले 'मैले यो भनिरहँदा' कण्ठै गरेर बसेका छन्। ठसठसी कन्नै पर्ने, अनुप्रास मिलाएर भन्नैपर्ने। चामल परोस् कि बियाँ परोस्, तिनलाई शब्द केलाउने फुर्सद छैन। नेपाली भाषाप्रधान टेलिभिजन, रेडियो, पत्र–पत्रिका, साहित्यिक कृति, कार्यक्रम अथवा स्तम्भ आदिको नाम अङ्ग्रेजीमै राख्नुपर्ने? जथाभाबी अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गरिनु गौरव हो कि हीनताबोध? ती बिचरा र बबुराहरूले नाउँ जुराउनलाई नेपाली शब्द नपाएरै विदेशबाट बेसाएका हुन् त? म यस्तै सोच्दै थिएँ। नातिनी चाहिँ मिट–मसला र नुन–खुर्सानी राखेर खिर पकाउँदै रहिछन्।
म्युजिक भिडियोमा रुचाइएका निर्देशक निकेश खड्का, अभिनेत्री अकेशा विष्ट र अभिनेता सौरभराज तुलाधरको टिम फिल्म यात्रामा निस्केको छ। फिल्म 'जिन्दगी रक्स'मार्फत उनीहरूले ठूलो पर्दामा डेब्यू गरेको मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी...
ड्राइभरले सबैको कचकच सुन्नुपर्छ : रूपक श्रेष्ठ, बा.३ख ४३९३
कुन रुट हो ? काठमाडौँ–जिरी। उमेर कति भयो ? २६ वर्ष।